Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Mexico » Ny marina any Mexico momba ny fahafatesan'ny COVID-19 dia sarotra atelina
Manomboka amin'ny isa 17 ka hatramin'ny laharana 2 manerantany. Ity no fitsangatsanganana statistika tamin'ny famakafakana ny isan'ny olona maty tao COVID-19 tany Mexico.
Firenena farany mahafaty roa tany Mexico tamin'ny fahafatesan'ny COVID-19 narahan'i San Marino, Etazonia tamin'ny isa 15
Ny fitsapana ambany dia nanampy tamin'ny statistikan'ny COVID-198 diso tany Mexico
Volana janoary no volana ratsy indrindra tany amin'ny Pandemie ho an'i Mexico
Ny isan'ny maty any Mexico amin'izao fotoana izao dia voalaza fa 201,623. Na izany aza, nanaiky ny governemanta federaly meksikana fa lavitra ny fahamarinana izany. Tombanana ho mihoatra ny 321,000 izao ny isa any Mexico.
Raha nisaina mifandraika amin'ny mponina 1 tapitrisa izany dia maty 1,552 isan-tapitrisa ny isan'ireo Meksikana ary ny isa vaovao dia hahatonga an'i Mexico ho 2,471 XNUMX tapitrisa.
Ny isa taloha dia nametraka an'i Mexico teo amin'ny toerana 17 manerantany. Etazonia no isa 14
Ny isa vaovao novaina dia mametraka an'i Mexico amin'ny toerana 2 manerantany. San Marino irery miaraka amin'ny 2791 no maty bebe kokoa noho ny COVID-19 mifandraika amin'ny mponina. Gibraltar dia mitovy lenta amin'i Mexico.
Izy io no mahatonga an'i Mexico ho firenena lehibe maty indrindra eto an-tany, raha jerena ny San Marino dia 33,894 129,031,687 ny isam-pireneny raha oharina amin'ny XNUMX any Mexico.
Eo anelanelan'i Mexico ny Repoblika Tseky, Hongria, Montenegro, Belzika, Bosnia & Herzegovina, Slovenia, Bulgaria, UK, Italia, Makedonia Avaratra, Slovakia dia ratsy noho i Etazonia amin'ny isa 15 eto amin'izao tontolo izao.
Ny isan'ny maty ofisialy any Mexico dia efa noheverina ho ambany ambany noho ny tahan'ny fitiliana ambany indrindra ary satria maro ny olona maty tany an-trano nandritra ny areti-mandringana nefa tsy nosedraina ho an'ny Covid-19.
Vokatr'izany, ny fandalinana ny tahirin-kevitra momba ny fahafatesan'ny olona be loatra sy ny taratasy fanamarinana ny fahafatesana no hany fomba ahazoana sary mazava kokoa momba ny fiantraikan'ny valanaretina coronavirus tany Mexico.
Ny Minisiteran'ny Fahasalamana tamin'ny sabotsy dia namoaka tatitra toy izany tamim-pahanginana izay nilaza fa nisy 294,287 19 ny maty vokatry ny Covid-14 hatramin'ny nanombohan'ny areti-mandringana ka hatramin'ny 27,416 feb. , midika izany fa farafahakeliny 19 no maty azo noho io aretina io.
Io isa io dia 69% ambony noho ny isa ofisialy maty 174,207 notaterin'ny minisiteran'ny fahasalamana ihany tamin'ny 14 feb.
Miaraka amin'ireo isa vaovao i Mexico no manana ny isan'ny Covid-19 ambony indrindra eran'izao tontolo izao aorian'ny Etazonia, arahin'i Brezila, noho ny tarehimarika ofisialy natambatry ny Oniversite Johns Hopkins.
Ny tatitry ny governemanta dia nanambara ihany koa ny habetsaky ny fahafatesan'ny onjan'ny virus coronavirus tany Mexico. Tamin'ny faran'ny volana desambra dia manodidina ny 220,000 no maty vokatry ny Covid-19. Niakatra maherin'ny 74,000 io isa io tao anatin'ny 1 1/2 volana voalohany tamin'ny taona.
Ny volana Janoary no volana ratsy indrindra tamin'ny areti-mandringana na amin'ny tranga vaovao na ny fahafatesany izay efa ho 33,000 ny farany, raha ny isa ofisialy. Saingy, ny tena maty dia tamin'ny volana voalohany tamin'ny taona dia azo inoana fa mihoatra ny 50,000.
Nahazo ny lokan'ny Best Adrian Gold Adrian tany Jamaika i Jamaika